IBC 2017: ULTRA HD FORUM TO DEMONSTRATE “HDR FOR ALL” ON EBU BOOTH (10.F20) XCHARX NAB Show News by Broadcast Beat. Official Broadcaster of NAB Show, Producer of NAB Show LIVE
Home » သတင်း » IBC 2017: EBU Booth ON "အလုံးစုံတို့အဘို့ HDR" (10.F20) သရုပ်ပြ Ultra HD ဖိုရမ်
IBC 2017: EBU Booth ON "အလုံးစုံတို့အဘို့ HDR" (10.F20) သရုပ်ပြ Ultra HD ဖိုရမ်
အဆိုပါဖိုရမ်ကိုလည်းအစောပိုင်း HDR ကိုဖြန့်ကျက်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းထံမှတုံ့ပြန်ချက်ပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများ, UHD လမ်းညွှန်ချက်များဗားရှင်း 1.4 လွှတ်ပေးရန်ပါလိမ့်မယ်။
IBC SHOW, အမ်စတာဒမ် - စက်တင်ဘာလ 14, 2017 - အဆိုပါ က Ultra HD ဖိုရမ်, Ultra-high-definition (UHD) ရုပ်မြင်သံကြားအတွေ့အကြုံများအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်နည်းပညာများ၏နိဒါန်းအဘို့အစက်မှုလုပ်ငန်းအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် defining ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းက, (ပထမဦးဆုံးအကြိမ်များအတွက်) အပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်-ကုမ္ပဏီဆန္ဒပြပွဲများကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်ဖြန့်ဝေမြင့်မားတဲ့ dynamic range ကို (HDR) အကြောင်းအရာအသက်ရှင်နေထိုင် ကျော် IPTVအဖြစ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်စျေးကွက်အတွက် HDR High-end နှင့် Mid-range ကို UHD TV ကို, စံ dynamic range ကို (SDR) အကြားအမျိုးမျိုးသောပြောင်းလဲခြင်းနည်းစနစ်များနှင့် HDR, မြင့်ဘောင်-နှုန်း (HFR) အကြောင်းအရာနှစ်ခုစလုံးအပေါ်အပေါင်းတို့, EBU တဲ 10 ပေါ်မှာ။ IBC 20 မှာ F2017 ။
ဒါ့အပြင်ညီလာခံကာလအတွင်းအဆိုပါဖိုရမ်အသစ်က "ဘယ်လို-ဖို့" အဖွဲ့ဝင်အော်ပရေတာအနေဖြင့်ဖြန့်ကျက်တုံ့ပြန်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီး PQ10, HDR10 နှင့် HLG10 ကို formats အပေါ်သတင်းအချက်အလက်, င်၎င်း၏အဆင့်တစ်ဦးကလမ်းညွှန်များ၏စတုတ္ထအများပြည်သူဗားရှင်းဖြန့်ချိမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါလမ်းညွှန်ချက်များလည်းပထမဦးဆုံးပြည့်စုံစေ့စပ်နောက်ပြန်-Compatibility ကို matrix, UHD န်ဆောင်မှုလယ်ပြင်၌ရှိသောအရာတီဗီမှမရရှိနိုင်ပါစေနိုငျသောပြပါဝင်သည်။
မှ Ian Nock, ထိုဖိုရမ်ရဲ့အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါအလုပ်အဖွဲ့ Group ၏ Co-ကုလားထိုင်ဒီရုံ high- မဟုတ်ဘဲကျွန်တော် IBC မှပို့လိုက်ကြတယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်, ကြှနျုပျတို့ HDR ကိုယေဘုယျစားသုံးသူများ၏တီဗီပေါ်မှာကြည့်နိုင်သလဲဆိုတာကိုပြသနိုင်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုပြောသည် အဆုံးစောစောမွေးစား '' တီဗီ။ "
အဆိုပါဖိုရမ်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်များအလုပ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌသူကို Madeleine Noland, မာရ်နတ်အသေးစိတ်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ကဒီမှာ devilish အသေးစိတ်ကိုအများကြီးဆက်ပြောသည်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်များအမှန်တကယ်လယ်ပြင်၌ရှိသောဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကပိုကိုယ်စားလှယ်များမှာလွှတ်ပေးရန်ပါတယ် "ဟုပြောသည်။ ဗားရှင်း 1.4 နှင့်အတူအော်ပရေတာယခုလယ်ပြင်၌ HDR ကိုစေလွှတ်သည့် trailblazer အော်ပရေတာများ၏သင်ယူမှုမှအကျိုးနိုင်တယ်။ "
အဆိုပါ, 2015 ဖွဲ့စည်း က Ultra HD Forum ၏စျေးကွက်ကလေးမွေးစားခြင်းမြှင့်တင်ရန်အတွက်တာဝန်ရှိသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည် က Ultra HD လာမယ့်မျိုးဆက်ရုပ်မြင်သံကြားအတွေ့အကြုံကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်နည်းပညာများ၏ကျယ်ပြန့်ထား၏ phased မိတ်ဆက်စကားများအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် defining ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းသည်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါစမ်းသပ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်နှင့်စံဖှံ့ဖွိုးတိုးတလှုပ်ရှားမှုများ align မှစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းကောင်များနှင့်ပူးပေါင်း။ အဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီများနှင့်အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကိုနောက်ထပ်အချက်အလက်များ၏စာရင်းတစ်ခုမှာရရှိနိုင် ultrahdforum.org နှင့် @UltraHDForum အောက်ပါဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Marta Twardowska, အီး: marta@wolfpackcoms.com ; မီတာ: + 31 621184585
2015 ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး EBU ညွှန်ကြားချက်များ H264 / H265 HDR HDR / WCG HDR10 HEVC HEVC / AVC HFR HLG10 IBC 2017 IBC ပြရန် စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo JCT-VC ကို ဆူညံသံလျော့ချခြင်း PQ10 SDR တီဗီနည်းပညာ UHD UHD / 4K / HD ကို က Ultra HD ဖိုရမ် viarte Warsaw ကို	2017-09-14
ယခင်: Versio ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူပလေးအောက်၏ဆက်သွယ်ရေး Accelerator ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်
နောက်တစ်ခု: IBC 2017: SoftAtHome AI အများနှင့်တီဗီန်ဆောင်မှုများ၏အကောင်းဆုံး Presents
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "IBC 2017: သရုပ်ပြ Ultra HD ဖိုရမ်" "EBU Booth ON (10.F20)" အလုံးစုံတို့အဘို့ HDR ။ http://www.broadcastbeat.com/ibc-2017-ultra-hd-forum-to-demonstrate-hdr-for-all-on-ebu-booth-10-f20/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။